အဖြေ ..... ~ ဒီမိုဝေယံ
၂၃.၄.၂၀၁၁ (စနေ) နေ့တွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ ၁၀ နှစ်ပြည့် အခမ်းအနား အား နံနက် (၉း၀၀) နာရီအချိန်တွင် စာရေးဆရာ၊ ဒါရိုက်တာ၊ နာယကကြီး ကျေးဇူးရှင် ဘဘဦးသုခ ၏ ရုပ်ထုဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားဖြင့် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ဘဘဦးသုခ၏ ရုပ်ထုမျက်နှာပြင်စတင်၍ ကတ္တီပါအခန်းဆီး မျက်နှာပြင်အကွယ်မှ ပေါ်ပေါက်လာစဉ် ဘဘဦးသုခ၏ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မိခင်များ (အမေ)အား ဂုဏ်ပြုစကားသံတို့သည် အရပ်ရှစ်မျက်နှာတွင် လွှမ်းခြုံ၍ ပေါ်ပေါက်လာတော့သည်။ စကားသံဆုံးသည်နှင့် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ မျိုးဆက်သစ်ကလေးငယ်များ၏ “ပေးဆပ်လိုက်ကြ xxx ဖေးမလိုက်ကြ ခွဲမရတဲ့တွဲလက်တွေခိုင်မြဲလို့ xxx စည်းလုံးကြမယ် . . . ပေးဆပ်လိုက်ကြ xxx ဖေးမလိုက်ကြ ခွဲမရတဲ့ တွဲလက်တွေခိုင်မြဲလို့ xxx စည်းလုံးကြမယ်” ဟူသော ခွဲမရတဲ့တွဲလက်များသီချင်းအား သံပြိုင်သီဆိုသံ တပြိုင်နက်ထွက်ပေါ်လာတော့သည်။ ကျွန်တော်တို့ ၏ လူမှုရေးစိတ်ဓါတ်အင်အားတို့သည် အသွေးအသားထဲ ဆူပွက်၍လာပါတော့သည်။ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့သားများအားလုံး ကြက်သီးမွှေးများ တပြိုင်နက်ထလာပါတော့သည်။ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သား အားလုံး၏ ပီတိအပြုံးများအားလုံး လွှမ်းခြုံနေတော့သည်။ ဘဘဦးသုခ၏ သက်မဲ့ရုပ်ထု မျက်နှာပြင်သည်လည်း အသက်ဝင်နေသည့်အလား ကျေနပ်ပီတအပြုံးများဖြင့် လွှမ်းခြုံနေသည်ကို တွေ့မြင်လိုက်ရသည်။
သက်မဲ့ ဘဘဦးသုခ၏ ရုပ်ထုမျက်နှာပြင်အဘယ်ကြောင့် ပီတအပြုံးများ လွှမ်းခြုံနေသနည်း ? အောက်ပါပုံရိပ်များအား ကြည့်ရှုလေ့လာခြင်းဖြင့် ဤမေးခွန်း၏ အဖြေအား ရရှိလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။